भाषा, साहित्यको संरक्षण आवस्यक : मुख्यमन्त्री राई - Arunkhabar.com
प्रकाशित : २९ असार २०७७, सोमबार १७:३८
विराटनगर, २९ असार । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भाषा, साहित्यको संरक्षण आवस्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको छ । संघियता अघिको शासन प्रणालीले श्रष्टाहरुको खोजी, पहिचान र सम्मानको काम नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।
२ सय ७ औं भानु जयन्तीका अवसरमा आज सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना थरेको श्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार सर्मपण समारोहमा उहाँले साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश १ सरकारले एकाडेमी बनाउने तयारी शुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षण हुन नसके नेपालीपन हराएर जाने उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले नेपाली भाषा संकटमा रहेको बताउनु भयो । नेपाली भाषा प्रयोग गर्नेको संख्या अहिले ३० प्रतिशत घटेको उहाँको भनाई छ । अहिले नै भाषा, साहित्यको संरक्षण र विकास नगरे भावि सन्ततिमा नेपाली भाषाको प्रयोग अझै घट्ने मन्त्री घिमिरेले बताउनुभयो । नेपाली भाषा माथि चुनौति रहेकाले यसको विकास र संरक्षण आवस्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपाली भाषासँगै प्रदेश १ मा बोलिने १ सय ४ वटा भाषा पनि संकटमा छन् ।’ मातृभाषा, संस्कृति र संस्कार संकटमा पर्दै गएकाले यसको संरक्षणमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रा.डा. टंक न्यौपाने, प्रा.डा. भीम खतिवडा, प्राज्ञ खेम नेपाली, साहित्यकार मुनाराम शेर्मा लगायतले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको स्मरण गर्नुभएको थियो ।